Diyaarado dagaal oo duqeeyey tuulo u dhaxeysa Muqdisho iyo Marko – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Tuulo u dhaxeysa Muqdisho iyo Marko oo lagu magacaabo Jilib Marko ayaa maanta waxaa cirka ka weeraray diyaarado dagaal, iyadoo la sheegay in halkaas ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan Alshabaab.
Goobjoogeyaal ayaa warbaahinta u sheegay in duqeynta lala bartilmaameedsaday saldhig Al-shabaab ay ku leeyihiin Jilib Marka iyo bar Koontorool oo degaankaasi laga galo.
Ilaa hada ma cada cidda iska leh diyaaradaha duqeynta fuliyay iyo khasaaraha duqeynta ay geeysatay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in diyaaradaha duqeynta geeystay loo malenayo in dowladda Mareykanka ay leedahay.
Tuulada Jilib Marko ku taalla wadada dhanka Xeebta ka gasha Marko ayaa waxaa horay ugu sugnaan jiray ciidamo taabacsan dowladd, balse kadib markii dhor jeer Alshabaab uga soo duuleen keymaha galbeedka ka xiga ayay isaga baxeen.